BunnyStudio: Tsvaga Professional Voice-Pamusoro Tarenda uye Ita Wako Audio Projekiti nekukurumidza uye Nyore | Martech Zone
Handina chokwadi chekuti sei munhu achivhura maikorofoni yavo yelaptop voita basa rinotyisa kurondedzera vhidhiyo yehunyanzvi kana odhiyo track yebhizinesi ravo. Kuwedzera rezwi rezwi uye kurira kwembambo hakudhuri, yakapusa uye tarenda kunze uko inoshamisa.
Vadivelu Comedy BunnyStudio
Kunyange iwe uchigona kuyedzwa kuenda kunotsvaga kontrakta pane chero nhamba yemadhairekitori, Vadivelu Comedy BunnyStudio yakanangwa yakanangana nemakambani anoda rubatsiro rwekuteerera neashambadziro avo ekuteerera, podcasting, matrailer emuvhi, vhidhiyo, foni system varindiri, kana mamwe mapurojekiti edhiyo. Ivo vanopa mukana wezviuru zvevanhu vakasununguka vezwi vatambi mumitauro yakawanda yakafanotariswa.
Iyo saiti inokupa iwe mukana wekusefa uye kubvunza tarenda ravainaro remazwiovers, kunyora, vhidhiyo, dhizaini, kana kunyangwe kunyora. Unogona kusarudza kubhuka tarenda iwe raunowana, gamuchira mumwe munhu anogona kutenderedza chirongwa nekukurumidza, kana kutomhanya mumakwikwi pakati pevashoma vezwi-pamusoro matarenda kuti iwe ugone kusarudza iye anokunda iwe pachako! Ingosarudza sevhisi, mutauro, uye nhamba yemazwi mune yako script uye wagadzirira kuenda:
Bhurawuza izwi pamusoro pemasampuli - Tsvaga dhatabhesi revatambi vezwi, tarisa iwo masampuli, uye sarudza iyo yakanyatsokodzera yako projekiti.
Tumira purojekiti yako pfupi - Tumira yako projekiti ruzivo. Izvo zvakadzama zvaunogona kupa, zvirinani ivo vanokwanisa kunzwisisa zvaunoda.
Gamuchira yako yakagadzirira-kushandisa izwi pamusoro - Bvumira uye utore yako yakagadzirira-kushandisa, mhando-inodzorwa izwi pamusoro kana kukumbira kudzokororwa.
Ini ndaishandisa chikuva munguva yakapfuura nerimwe basa (ivo vaimbozivikanwa se VoiceBunny) ndokudzoka nhasi kuzotora nyowani izwi-pamusoro pedu podcast, Martech Zone Interviews. Mukati meawa ndaive nezwi rakanyatsoitwa-pamusoro randiri kushandisa mune yangu inotevera episode.
Heino podhi yepodcast:
Heino podcast kunze:
Padivi katsamba… kumhanya kwekudzoka kwacho kwaigona kuita nekuti chaive chirongwa chidiki chine mazwi asingasvike zana ... ndinotenda yavo yekumhanyisa sarudzo ndeye isingasviki maawa gumi nemaviri pamapurojekiti mazhinji.
Ipuratifomu zvakare inokutendera iwe kuvaka rako pachako bhenji rebasa rezwi-pamusoro petarenda iwe wawakamboshandisa uye unoshuvira kushandisa zvakare… chinhu chakanakisa kumakambani anoshuvira kuchengetedza kumwe kuenderana kune kwavo odhiyo yekumaka!
Iyo chikuva inopawo iyo API yekambani dzinoshuvira kuisa izwi-pamusoro uye odhiyo post-yekugadzira mapurojekiti mune yavo chigadzirwa kana sevhisi. Uye, kumasangano makuru, unogona kubata BunnyStudio yemapurojekiti akakwira-vhorumu kana masevhisi anoda mafomati akasarudzika, kana zvakaomarara zvinounzwa.
Raira Izwi Rako Pamusoro Zvino!
Kuzivisa: Ndiri mubatanidzwa we Vadivelu Comedy BunnyStudio.
Tags: Audioodhiyo yekugadzirisaodhiyo post-kugadzirwakudhindwa kwezwibunnystudiodubbingbhaisikopo trailer izwibhaisikopo trailer voiceovermitauro yemitauro yakawanda pamusorofoni system mushandiPodcast intropodcast kunzepodcastingpost-kugadzirwatranscriptionshandurovatambi venzwiizwi pamusorovoicebunnyinzwi pamusoro